Amachibi okufakelwa wokulingisa imithelela yokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezinqubo eziningi zocwaningo zokunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu emhlabeni. Enye yazo (esizokhuluma ngayo namhlanje) yinethiwekhi yamachibi okwenziwa amakhulu amabili asebenzela ukuqonda kangcono ukuthi imvelo emhlabeni wonke isebenza kanjani nokubona ukuthi baphendula kanjani emiphumeleni yokuguquka kwesimo sezulu.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi lolu cwaningo lusebenza kanjani nokuthi imiphi imiphumela etholakalayo?
1 Amachibi okufakelwa
2 Inselelo yesayensi
3 Amachibi okuhlola enhlonhlo
Amachibi okufakelwa asakazeke kuyo yonke iNhlonhlo Yase-Iberia futhi anezimo zezulu ezahlukahlukene ezahlukahlukene ukwazi zonke izimpendulo emiphumeleni yokuguquka kwesimo sezulu.
Lesi silingo sibizwa ngokuthi Amachibi ase-Iberia futhi sakhiwe izikhungo eziyisithupha ezisezindaweni ezahlukene eSpain nasePortugal. Endaweni ngayinye Amachibi angama-32 noma amachibi okufakelwa afakiwe, ahlukaniswe ngamamitha ayi-4 ukuqhela.
Ngamachibi ungaphinda wenze kabusha isimo sengcindezi, izinga lokushisa, imimoya, njll. Ukulingisa izinhlelo zemvelo. Ngale ndlela, amamodeli angakhiwa ukuze aqonde ukusabela kwemiphakathi yemvelo, manje nasesikhathini esizayo, ekuguqulweni kwemvelo okubangelwe ukuguquka kwesimo sezulu.
Isistimu yemvelo ngayinye inezinsizakalo zemvelo. Lezi zinsizakalo zisetshenziselwa ukumunca i-CO2, zinikeze izinkuni noma enye imithombo yemvelo. Ukuguquka kwesimo sezulu kuhlasela ubuningi nekhwalithi yalezi zinsizakalo ze-ecosystem, kudale umonakalo ezimpandeni zemvelo. Isibonelo, ukunciphisa amanzi atholakalayo ezitshalweni, ukukhuphula izinga lokushisa, ukucekela phansi imvelo yasemanzini noma ukuncibilikisa amashalofu asezindaweni ezibandayo.
Lezi zinsiza zine-laboratory emaphakathi phakathi kwe-aquarium nokuhlolwa kwezimo zemvelo. Ngakho-ke, banikela ngemininingwane ebalulekile futhi efanelekile ekusebenzeni kwawo wonke amanethiwekhi we-trophic yemvelo futhi banqume iphuzu elibucayi lalowo nalowo wabo.
Lawa machibi ayinselelo enkulu yesayensi, ngoba kuyinkimbinkimbi ukuthola imodeli ekwazi ukutadisha ukwakheka, ukwakheka namandla we-ecosystems ngendlela yomhlaba. Uma unolwazi oluthe xaxa ngalo, kuzoba lula ukukwazi ukulingisa ukubikezela kwesikhathi esizayo, into kuze kube manje kube nzima kakhulu ngenxa yokubuka konke kwezemvelo.
Akuseyona indaba yokwenza okusha kusukela ekufakweni kwedatha ebiqoqwe phambilini ezinhlelweni zamakhompyutha, kepha kunalokho ukwakhiwa kwephrojekthi ephelele yokuhlola lapho kucatshangelwa khona ukuqoqwa kolwazi oluyisisekelo.
Amachibi okuhlola enhlonhlo
Amachibi okufakelwa, amaxhaphozi amancane akhiwe kuqala, atholakala ezindaweni eziyisithupha zeNhlonhlo Yase-Iberia enezimo zezulu ezahlukahlukene: ama-semi-arid amabili (iToledo neMurcia), ama-alpine amabili (iMadrid neJaca), iMedithera eyodwa (i-oravora, iPortugal) kanye ne-temperate eyodwa (i-Oporto, iPortugal).
Ngamunye wabo ugcina amalitha amanzi ayi-1.000 100 namakhilogremu ayi-XNUMX wezidumbu zombili ezivela endaweni lapho kwenziwa khona ukuhlolwa.
Ukuze wazi impendulo yemvelo ekuguqukeni kwesimo sezulu, imiphumela yako echibini ngalinye yenziwe ngokukhohlisa izinto zemvelo ezinjengezinga lokushisa, izinga lamanzi, njll. Lokhu kuzovumela ngokuzayo ukuthi kubonakale imithelela kuma-webs okudla.
Kukhona imiphumela ezingeni lamagciwane kanye nama-virus, okwenza ukubikezela ikusasa kube nzima kakhulu. Le mithelela ingaba nemiphumela emibi kumjikelezo wekhabhoni futhi ithinte amandla amaningi alawula ushintsho lomhlaba jikelele.
"Amachibi ase-Iberia", umsebenzi we-trajectory ehamba kancane, uzothuthukisa izivivinyo ezimeni ezahlukahlukene zezulu: engxenyeni eyodwa kwezintathu zamachibi ukushisa kwemvelo kuzolingiswa ngokwandisa amanzi nokushisa, kokunye okwesithathu ukwenziwa ihlane kuzokwenziwa ngokunyusa izinga lokushisa kwamanzi futhi engxenyeni yokugcina yesithathu, ishiywa ingonakalisiwe, ilawulwa kuphela izimo zezulu zamanje.
Zonke lezi zimo ezilingiswayo zingaba yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu emvelweni.
Njengoba ukwazi ukubona, kunezivivinyo eziningi nocwaningo oluzinikele ekwazini imithelela yokuguquka kwesimo sezulu kumvelo yethu ngoba kuyinto ebaluleke kakhulu ekusindeni kwezigidi zezinhlobo emhlabeni jikelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amachibi okufakelwa wokulingisa imithelela yokuguquka kwesimo sezulu